Malunga nathi - Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). Lishishini lezabelo elinemali eyimali eyi-RMB16 yezigidi. Inkampani yethu igubungela indawo engamawaka angama-53 eemitha zesikwere, ezingama-38 ezingamawaka ezenzelwe oomasifundisane. Sixhotyiswe ngaphezu kwama-260 amaziko amatsha naphambili. Sigxile ekuveliseni izakhiwo ezikhulu zoomatshini bokwakha kunye nokukwazi kwethu ukuvelisa ngonyaka ngamawaka angama-20 eetoni. Oomatshini abakumgangatho ophezulu wokulawulwa kwamanani, ukuwelda, ukubumba kunye nokunyanga ubushushu kusetyenziswa kwinkqubo yemveliso yethu. Iimveliso eziphambili ze-XJCM zingumhlaba we-crane, ilori yendalo, i-crane yokuziqhelanisa, ipayipi yemisebenzi emininzi kunye neendawo ezininzi zoomatshini bokwakha. Ngokuqinisekileyo zikumgangatho osemgangathweni.
XJCM yenye umthengisi kukhuphiswano ezibalaseleyo XCMG. Sinikezela ngamabhakethi e-excavator, iibhakethi zokulayisha, iingalo zerocket, amaqhina, ii-booms, izakhelo zangaphambili, izakhelo zangasemva, iipini ezisongwayo kunye nezinye iimveliso ezinxulumene neXCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG kunye nezinye iinkampani ezininzi ezaziwayo zoomatshini e China. Iicranes zethu zothotho lwe-RT, i-QY yeelori zothotho kunye ne-JFYT yeenqanawa zothotho lwenqanawa zithunyelwa eMntla Melika. UMzantsi Melika, iAfrika, uMbindi Mpuma, iNtshona yeAsia, uMzantsi-mpuma weAsia kunye namanye amazwe angaphezu kwama-30 kunye nemimandla.
Umxhasi wethu: • Iiprojekthi zeDayimani iMalta • IZIBONELELO ZOKUVUMELANA NEZolimo (NZ) LIMITED • I-Avsrya Construction • IBALBANS GROUP NOTYALO-MALI LTD. ISWISS GRADE CONSULT LIMITED • ISAMAD RESOURCES LTD. • ITayo Propert Mamagements Ltd.
Ishishini loomatshini bokwakha
Ngamandla abomeleleyo kunye nolwakhiwo olululo lwenkampani, inkampani idwelise ngempumelelo kwiZiko loTshintshiselwano ngezoBalo leJiangsu kwaye yaba lilungu lemarike yorhwebo yokulingana. Phakathi kwabo, i-DGY uthotho lwemibhobho yentsebenzo kunye nokuzilayisha kwezothutho zithuthi ziye zaphumelela amalungelo awodwa omenzi wechiza. JFYT series ngokukhawuleza ezihambayo self-ukwakha inqaba nendwe okrelekrele imveliso yokuqala e-China. I "RT series off-road crane" ngokuzimeleyo iphandwe kwaye yaphuhliswa yinkampani yathathelwa ingqalelo njenge "mveliso yobugcisa obuphezulu" liSebe lezeNzululwazi kunye neThekhinoloji yePhondo laseJiangsu kwaye yadweliswa kwi "Isicwangciso seTotshi seSizwe seProjekthi yokuBonisa iMveliso" nguMphathiswa yezeNzululwazi nobuChwepheshe.
• Ukusukela oko yasekwa, inkampani ityale ngokulandelelana izixhobo zoomatshini kunye nezokuvavanya, kwaye inombutho wemveliso kunye nomthamo wokuqhubekeka ngaphezulu kweeseti ezingama-3,000 zoomatshini bezinto ezinkulu kunye nezixhobo.
2500T CNC ukugoba umatshini
Umatshini omkhulu okruqulayo
• Ezinye izixhobo ezinje ngezixhobo zokusika i-laser, umatshini wokusika weplasma, umgangatho okruqulayo kunye nomatshini wokugaya.
Umatshini wokusika weplasma we-CNC
Umatshini wokusika we-CNC we-CNC
• Izixhobo zokulungelelanisa ezintathu, isixhobo sokufaka iintsimbi, njl., Zonke ezizizixhobo eziphambili e-China.
Gantry welding oluzenzekelayo
Ukulungelelanisa izixhobo ezintathu
Inkampani inenkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho wobuchwephesha, kwaye yaphumelela inkqubo yolawulo lomgangatho ye-ISO9001, ISO18001 inkqubo yezempilo kunye nokhuseleko kwinkqubo yokuqinisekisa kunye nokuqinisekiswa kwe-CE, isatifikethi seGOST. Okwangoku, inkampani ineetekhnoloji ezinelungelo elilodwa lomenzi ezingama-56, kubandakanya amalungelo awodwa omenzi wechiza ali-15 kunye neepatent ezingama-41 eziluncedo.
Inkampani idibanisa itekhnoloji, ikomkhulu, iitalente, izinto ezakhiweyo, kwaye ithatha imboni njengoxanduva, ukuthembeka, umgangatho njengengcambu, kwaye ibuyisele uluntu ngemveliso zobunjineli ezikumgangatho ophezulu!